Wararka - Cilmibaarista iyo Codsiga Ogsijiin ee Daryeelka Caafimaadka
Cilmi-baarista iyo Codsiga Ogsijiin ee Daryeelka Caafimaadka
Ogsijiin waa mid ka mid ah qaybaha hawada. Waa midab la’aan, ur iyo dhadhan midna. Ogsijiin ayaa ka culus hawada. Waxay leedahay cufnaan dhan 1.429g / L marka loo eego xaaladaha caadiga ah (0 ° C iyo cadaadiska Hawada 101325 Pa), waana lagu milmi karaa biyaha. Si kastaba ha noqotee, kala-baxnimadeeda ayaa aad u hooseysa. Marka cadaadisku yahay 101kPa, ogsijiintu waxay noqoneysaa dareere buluug khafiif ah oo qiyaastii -180 ℃ ah, iyo baraf-u eg buluug qafiif ah oo adag oo qiyaastii -218 ℃ ah.
Ogsijiin waxaa loo isticmaalaa warshadaha qashinka, warshadaha kiimikada, daaweynta bullaacadaha, daryeelka caafimaadka, taageerada nolosha, militariga iyo hawada sare, iwm.
Codsiga oksijiinta ee daryeelka caafimaadka iyo caafimaadka waa: neefsashada sahayda ee loo adeegsado bey'adda hypoxic, hypoxic ama anaerobic, sida: howlaha quusitaanka, buuraha, duulimaadyada sare, hawo bannaan, badbaadinta caafimaadka, iwm.
Isla mar ahaantaana, qalabka neefsashada oksijiinta waxaa badanaa loo isticmaalaa mid ka mid ah tallaabooyinka gargaarka degdegga ah waana lagama maarmaan kooxaha samatabbixinta iyo ambalaaska.
Daaweynta caafimaadka iyo dayactirka nolosha, habka oksijiin waa in la ilaaliyo cadaadiska qeyb ee oksijiinta ee dhiiga halbowlaha una dhow heerka caadiga ah, kaasoo ah 13.3kPa (100mmHg).
Horumarka joogtada ah iyo hagaajinta isku-uruuriyaha oksijiinta yar, daaweynta oksijiinta guriga ayaa lagu caddeeyey daawada bukaan-socodka. Waxay si gaar ah ugu habboon tahay bukaanka waayeelka ah. Cudurrada la daweeyey waxaa ka mid ah cudurka 'Emphysema', boronkiitada raagta, neefta neefta ku dhacda, cudurka qaaxada oo la sii daayo, oof-wareenka kala-baxa, bronchiectasis, kansarka sanbabada, iwm
Qalabka codsiga Oxygen waa mid ka mid ah jihooyinka ugu muhiimsan ee cilmi baarista kooxda AngelBiss. Waxaan ku guuleysanay tikniyoolajiyadda soo saarista isku-urursiga oksijiinta iyo adeegga gadaashiisa ugu fiican Iyo shirkadda AngelBiss waa tan ugu horreysa adduunka ee diirada saarta isbedbeddelka isku-urursiga oksijiinta sidoo kale kan ugu horreeya ayaa xakameyn kara heerka isbedbeddelka illaa 0.1% illaa iyo hadda (taas oo illaa iyo heerka heerka kale ee celceliska warshadaha uu ka sarreeyo 0.6%) . Heer-kulka heerka ogsijiinta wuxuu wadaagaa 24 saacadood maalintii, 7 maalmood usbuucii, iyo in ka badan wadarta 18000 saacadood ee hubinta sahayda oksijiinta.